ABRASIVE Fekitori, Vatengesi - China ABRASIVE Vagadziri
Stainless simbi yakatemwa waya kupfura ndeye yedu yakasarudzika hunyanzvi.Iyo inogadzirwa neSUS200, 300, 400 dzakateedzana simbi isina simbi waya yakatemwa kuita zvikamu. Stainless simbi yakatemwa waya yakapfurwa irikushandiswa mune inowedzera nhamba yezvakakosha kunyorera uko kwakasvibisa kusvibiswa mukuputisa simbi isina simbi, titanium
Yakagadzirwa isina simbi pfuti yakagadzirwa neUSUS200, 300, 400 dzakateedzana simbi isina waya uye pasi kuita mabhora eakasiyana roundness.Stainless simbi bara ine yakanaka kupisa kuramba, ngura kuramba, glossy surface.It inogona kutora akakwana kushanda kune Stainless simbi workpieces.
Kanda Stainless Simbi Pfura
Stainless simbi yekupfura ndiyo midhiya mhando yakave inozivikanwa zvakanyanya. Izvi zvigadzirwa zvinoita zvakafanana nesimbi kupfura, zvisinei, zvakagadzirwa nesimbi isina simbi. Iine huwandu hwepamusoro hwe nickel uye chromium. Uye akanaka masvikiro ekufunga kana kusvibiswa kwakashata kwechikamu chebasa kusingave
Yakakwira Carbon Yakatenderedzwa Simbi Pfuti
Yakakwira kabhoni simbi yakapfurwa, yakagadzirwa nesimbi yakakosha, yakaoma uye yakapfava, ine zvirimo mukabhoni yakakura kupfuura 0,85% .kuita atomization maitiro, idenderedzwa zvidimbu zvakagadzirwa nesimbi yakanyungudika. decarboniza
Yakadzika Carbon Yakatenderedzwa Simbi Pfuti
Yakadzika kabhoni simbi pfuti ine shoma kabhoni, phosphorus uye nesarufa kupfuura yakakwira kabhoni simbi kupfura. Naizvozvo, chimiro chemukati chemukati cheakadzika kabhoti kupfura chakatsetseka. Yakadzika kabhoni simbi pfuti yakapfava kana ichienzaniswa neakakwira kabhoni simbi pfuti zvakare.
Aluminium yakatemwa-waya pfuti (Aluminium Shot) inowanikwa mune yakavhenganiswa aluminium mamakisi (4043, 5053) pamwe neiyo alloy mamakisi senge mhando 5356. Makirasi edu akasanganiswa anoburitsa yepakati B renji (Anenge makumi mana) Rockwell kuomarara nepo mhando 5356 ichaburitsa yakakwira Rockwell B kuomarara mumakumi mashanu kusvika makumi manomwe.
1. Inobvisa kupenya kusvika ku0.20 ″ kubva ku die castings isina kukuvadza pamusoro
Inoderedza kupfeka uye kubvarura pamidziyo yekuputika
Inobvisa pendi uye zvimwe zvipfeko pasina kukuvadza pamusoro pechikamu
Firimu rakatetepa rezinc rinoiswa panhengo dzesimbi panguva yekutenderera ichipa dziviriro yenguva pfupi
Isu tinopa yemhando yepamusoro yeZinc Dzika Wire Shots. Inowanikwa pamitengo inokwanisa, zvigadzirwa zvedu zvinoderedza kupfeka uye kubvarura pamidziyo yekufema. Aya maZinc akachekwa waya epfuti akapfava pane simbi isina waya yakatemwa waya kana zvigadzirwa zvigadzirwa. Zinc yakatemwa waya kupfura inowanikwa muhukuru hwakasiyana
Alloy kukuya simbi kupfura kwakavakirwa pane yakakwira-kabhoni simbi kupfura, yakaderera-kabhoni simbi kupfura, uye yakaderera vanadium simbi kupfura, tichifunga nezve inouraya kushaya simba kwezviri pamusoro zvigadzirwa: mhepo gomba, kutsemuka, kuomarara mutsauko, gadzira izvo zvitsva zvigadzirwa nekumisikidza iyo nokuchengetedza michina, unogona kusarudza zvakasiyana zvinhu
Nokuchengetedza simbi anokungurutsira bhora chakagadzirwa kumativi simbi sezvo mbishi zvinhu, riri mumuviri kupatsanurwa itsva rinopfungaira uye nokuchengetedza michina uye ipapo kugadzirwa anokosha kupisa kurapwa michina.
Mushure memakore eruzivo rwekuunganidza uye nekudzokorora bvunzo,
Cheka Wire Shot / Nyowani waya
Dura Wire Shot inogadzirwa kubva kune yemhando yepamusoro waya iyo yakatemwa kune hurefu hwakaenzana nehupamhi hwayo. Iyo waya inoshandiswa kuburitsa Cut Wire Shot inogona kugadzirwa neCarbon Simbi, Stainless Simbi, Aluminium, Zinc, Nickel Alloy, Mhangura kana mamwe maalloys esimbi. Ichine makona akapinza kubva pakucheka
Cheka Wire Shot / Yakashandiswa waya
Iyo yakadzoreredzwa simbi yakatemwa waya kupfura rudzi rwechigadzirwa icho chinoshandisa icho chakashandiswazve zvinhu, mutengo wayo wezvinhu wakaderera, uye zvinonetsa kuburitsa yakakwira chaiyo zvigadzirwa, irwo rudzi rwechigadzirwa runogona kungoshandiswa chete kuchenesa iyo yakakanda pamusoro.Iyo inonyanya uesd mune ruzhinji Kune vatengi vasina akakosha
Yakakwira kabhoni angular simbi grit inogadzirwa kubva yakakwira kabhoni simbi kupfura. Simbi pfuti dzinopwanywa kuita granular grit fomu uye zvichizopfavisa kune matatu akasiyana kuomarara (GH, GL uye GP) kuti uwane akasiyana mafomu. Yakakwira kabhoni simbi grit inoshandiswa zvakanyanya senge midhiya yezvakanaka
Yakadzika Carbon Angular Simbi Grit
Yakadzika kabhoni angular simbi grit inogadzirwa kubva yakaderera kabhoni simbi
pfuti.Simbi dzesimbi dzinopwanywa kuita granular grit.Mahara ekuremara nekuda kwekupisa kurapwa nekuti kuwedzerwa kurapwa hakudi.